ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: 2009 ကို ဖြတ်သန်းခြင်း
2009 ဖြတ်သန်းခဲ့တာ ဘယ်လိုသိနိုင်သလဲ............
၁။ သင်ဟာ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်မီးဖိုမှာ ယောင်ပြီး password ရိုက်ထည့်နေမိမယ်။
၂။ ဖဲကို တကယ့်ဖဲချပ်နဲ့ မဆော့တာ နှစ်အတော်ကြာသွားပြီ။
၃။ မိသားစု သုံးယောက်ထဲတင် ဆက်သွယ်ဖို့ ဖုန်းနံပါတ် ၁၅ ခုရှိနေမယ်။
၄။ ခုံချင်းကပ်ရက် အလုပ်လုပ်နေသူကို ပြောစရာရှိနေရင်တောင် အီးမေးလ်ပို့တယ်။
၅။ ကားကို ဂိုဒေါင်ထဲထိုးရပ်ပြီး အိမ်ကလူတွေကို ဝယ်လာတဲ့ ပစ္စည်းလာသယ်ဖို့ မိုဘိုင်းနဲ့ လှမ်းခေါ်မယ်။
၆။ တီဗီက ကြော်ငြာတွေက ဝက်ဆိုဒ်လိပ်စာနဲ့ အွန်လိုင်းကပဲ ဈေးဝယ်နေလိမ့်မယ်။
၇။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အမျိုးတွေနဲ့ Face Book လို Virtual World တွေမှာပဲ လက်ခံတွေမယ်။
၈။ သင့်ရဲ့ လွန်ခဲ့သော ၁၀နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ လောက်က သင်နဲ့ အတူမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ ဟန်ဖုန်း အိမ်က အထွက်မှာ ပါမလာတာနဲ့ပဲ သင်ဟာ ထိတ်လှန့်သွားပြီး နောက်ပြန်လှည့် အမြန်ယူတော့တာပဲ။
၁၀။ အိပ်ယာကထတာနဲ့ ဘာမှ မစားနိုင်သေးပဲ အွန်လိုင်းတက်မယ်။
၁၁။ တဖက်လှည့်ပြီး စပြုံးတော့မယ်။
၁၂။ ဒါကို ဖတ်ပြီး ခေါင်းငြိမ့်ပြီး ပြုံးနေပြီ။
၁၃။ နောက်ပြီး သင်ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကို ဘယ်သူတွေကို Forward လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေပြီ။
၁၄။ အလုပ်များလွန်းလို့ ဒီစာမှာ နံပါတ် ကိုး မပါတာတောင် မသိလိုက်ဘူး။
၁၅။ အမယ်.....နံပါတ်ကိုး တကယ်မပါဘူးလားဆိုပြီး အပေါ်က စာကြောင်းကို ပြန်ဖတ်နေတယ်။
.........................အဲဒါကြောင့် ပြောပါတယ်။ သင် ၂၀၀၉ ထဲရောက်ခဲ့တယ်လို့။
ဘယ်ကနေ ဘယ်လို လူတစ်ယောက် ပိုလာတာလဲနော်????
ကိုလူထွေး December 25, 2009 at 4:09 AM
ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကို ဘယ်သူတွေကို Forward လုပ်ရမလဲ စဉ်းစားနေတာ...
ဒဏ္ဍာရီ December 25, 2009 at 4:09 AM
သတိထားမိပါတယ် နံပါတ် ၉ မပါတာ။း)
ပြောမလို့ရှိသေး ကိုချမ်းက အောက်မှာ ရေးသွားတာကိုး။
နှစ်တစ်နှစ်တောင် ကုန်တော့မယ် ကိုချမ်းရေ... အမတို့တွေလည်း လက်ရှိဘ၀ထက် ရင့်ကျက်ရတော့မယ်။
ကိုလူထွေး December 25, 2009 at 6:13 AM
လူတယောက်တိုးလာတာကို လိုက်ကြည့်တာ ခေါင်းမူးသွားပြီ...
Flower December 25, 2009 at 6:53 AM
ဖတ်ပြီးတော့ တကယ်ကို ပြုံးမိပါတယ်.. နံပါတ်ကိုးမပါတာလဲ တကယ်ကို မသိလိုက်ပါဘူး
peter kyaw December 25, 2009 at 1:14 PM
ဟန်းဖုန်းတို့ အွန်လိုင်းတို့ ဆိုတာ အလှမ်း
~ဏီလင်းညို~ December 25, 2009 at 3:59 PM
ကျွန်တော်လည်း ကိုလူထွေးလို လူလိုက်ရေနေတာ...ခေါင်းမူးတွားဘီ....း)
desertraindrops December 25, 2009 at 4:40 PM
မောင်သီဟ December 25, 2009 at 7:57 PM
း) နှုတ်ဆက်တယ်ဗျာ တခါတည်းနော့ ၁ရက်နေ့ပြန်ပြီ
ရွာကိုး) ဟိုနေ့ ဂျီတော့မှာတွေ့လိုက်လို့ခေါ်သေးတယ်
မြတ်မွန် December 27, 2009 at 8:40 AM
ညလင်းအိမ် December 27, 2009 at 12:21 PM
မိုးစက်အိမ် December 27, 2009 at 4:12 PM
တကယ်တော့လည်း ဟုတ်ပါတယ် ဒါကြောင့်
ပြုံးသွားမိတယ် ကိုချမ်းလည်း မီးဖိုဖွင့်ရင်
ပတ်ဝေါ့စ် ရိုက်ဖို့ မေ့မနေနဲ့ နော် . . . :P
khun December 28, 2009 at 10:39 AM
Cameron December 30, 2009 at 4:16 AM
ကိုချမ်း နှစ်ကူးအမှတ်တရမှာ 2009ကိုဖြတ်သန်းခြင်းမပါဘူးနော်
Anonymous December 30, 2009 at 5:02 AM
မြတ်မွန် December 31, 2009 at 10:02 AM
＊！！Happy New Year！！＊